Star Wars: Ugaadhsadayaashu waxay sanadkan ka degi doonaan Android | Androidsis
Waxaan haynaa Ciyaar cusub oo Star Wars ah dhamaadka sanadka waana ugaarsadeyaal, sida ay ku dhawaaqday Nintendo Beddelka maalmo ka hor, iyo in kasta oo aan ku soo daahnay warka, haddana waxaa habboon in aan mar kale ku milicsanno koonka uu abuuray George Lucas
Waana taas waxaan sidoo kale yeelan doonnaa Android iyo iOS imaatinkaaga sanadka dhammaadkiisa haddii ay wax waliba u socdaan sidii loogu talagalay. Ciyaar Star Wars ah oo laga heli lahaa inta udhaxeysa qaybaha VI iyo VII ee rukhsadda ay maanta leedahay Disney; dambi in aan leenahay taxanahaas weyn ee loo yaqaan 'The Mandalorian'.
Star Wars: Ugaadhsade, iyo sida aad ku arki karto muuqaalka fiidiyowga, waxay nagu qaadataa ciyaaro kooxeed si aan ula kulanno 4 ciyaartoy kale waxaa loo malaynayaa inay tahay MOBA aynaan quudhsan karin isla marka ay ku helaan Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Star Wars: Ugaadhsadayaashu waxay imanayaan Android dabayaaqada sanadkan